Palitao makiazy Contour & bronzer vita amin'ny paosy 9 loko mba hifanaraka amin'ny tonon-koditry ny hoditra tsy misy poizina sy paraben maimaimpoana ary fijery voajanahary tsy misy herisetra.
Voalohany:Ny palitao Contour & bronzer dia mora ampiasaina tokoa, mahatonga ny mazoto makiazy ho rivotra. Ny alokaloka dia azo afangaro ary ampifanarahana amin'ny famoronana alokaloka tianao. Ahodino fotsiny ny borosinao amin'ny makiazy ao anaty alokaloka manjelanjelatra ary apetaho amin'ireo faritra irian'ny tavanao. Dia izay.
Maharitra: palitao makiazy contour ary vovoka mombamomba azy, malefaka ary mora mifangaro. Ny takelaka fisoloana vovoka dia afaka mampihena ny endrika tarehy misy menaka sy taolana takolaka mahavariana. Tazomy mandritra ny fotoana maharitra ny makiazy anao
Ny livery dia maivana ary mora mifangaro, Vodisa Contour eye shadow disc. Ny makiazy contour dia tena mora afangaro amin'ny rantsantanana na borosy, loko contour voajanahary matte tonga lafatra, mety amin'ny makiazy isan'andro na fotoana manokana. Mety amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny karazany amin'ny hoditra.
Roa voalohany:Ho gaga ianao amin'ny endriny malefaka sy maivana. Namboarina tamina akora voajanahary izy io mba hitsonika ao anaty hoditrao. contour & bronzer dia manampy ny famaranana tonga lafatra nefa tsy mahatsiaro mavesatra ary azo apetraka amin'ny valiny tena miavaka.
Telo voalohany:Beautydom's Glowing make up Palette dia misy alokaloka miloko marevaka 9 miloko marevaka manomboka amin'ny hazavana ka hatramin'ny maizina mifanaraka amin'ny volon-koditra samihafa. Ireo alokaloka ireo dia azo ampiasaina hanasongadinana ireo faritra avo amin'ny tarehy ho endrika voafaritra kokoa sy mando.
Mihazona ny soatoavina fototra izahay: ny fahadiovana, ny karazany, ny fahatsorana ary ny kalitao. Ny vokatray dia vita amin'ny akora azo antoka indrindra, mahatonga ny kosmetika tsy misy poizina sy tsy paraben. Tsy misy herisetra biby tanteraka koa izahay.
Efatra voalohany:Varahina matte, kosmetika varahina, manjelanjelatra, tsy misy tselatra. Ity vovoka matte, vovoka varahina ary karazan-koditra rehetra ity.
Mora kokoa noho ny taloha ny oroka manjelanjelatra, mamirapiratra varahina matte! Ity no toneran'ny Bronzer tsara indrindra ho antsika, miaraka amin'ny tarehy mafana sy main'ny masoandro. Farito ny endrikao ananan'ny tarehy ary ampiasao ity kosmetika varahina ity ho toy ny drafitra matte ho an'ny faritra banga amin'ny tavanao.
Mampiasainay ny vokatra feno makiazy feno hamaranana ny makiazy, manomboka amin'ny mena, alimo, fotony ary takona afara amin'ny paleta sy lokomena, dia hahatsapa ho tsara ianao.
Ny fanomezana tonga lafatra, ny Grooming Kit dia manampy ny endrikao ho tsara endrika kokoa, fa tsy ny fanaovana endrika mavesatra loatra na matevina loatra. Tonga lafatra amin'ny makiazy isan'andro.
Teo aloha: Fanamboarana tarehy-BD-Blush
Manaraka: Makiazy molotra-BD-LS-009
JOYO © Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Lipotra Mini, Eyeshadow tsara indrindra amin'ny crème, Solomaso maso volamena, Borosy tsara indrindra, Lokomena savony, Matte Eyeshadow Palette, Vokatra rehetra